Xiddigta Hunter waa RPG si fiican loo dejiyay oo leh mowduuc bannaan | Androidsis
Stellar Hunter waa RPG si fiican loo farsameeyay oo loo yaqaan 'RPG' oo leh dagaal ku saleysan leexasho
Stellar Hunter waa ciyaar cusub oo RPG ah taas oo aan ula dagaallameyno marba marka ka dambeysa taasna waxay leedahay waxyaabo aan ku muujino Iskusoo wada duuboo go'aan qaadashada iyo sida aan midba midka kale uga caawin karno wada hadalada si loogu daro xubno cusub kooxdeena ama aan si fudud cadawga ugula tartamo inay si toos ah ula dagaallamaan.
Ciyaar RPG ah oo nuxurkeedu yahay ma awoodi doonno inaan adeegsanno isbaanish inaad na fahanto, maadaama xilligan la joogo ay tahay oo keliya Ingiriisi. Waa mid curyaan ah oo ka sii muhiimsan haddii ay suurtagal tahay waa RPG oo ay wadahadalladu muhiim u yihiin; in kastoo aan waliba u kala ciyaari karno si nasiib ah si aan u aragno waxa dhaca. Isaga maahan wax kiisa, ee aan u nimaadno.
1 A RPG mawduuc ku-meel-gaar ah oo leh walxo roguelike ah
2 Ku cusbooneysii kooxdaada hubka iyo xubnaha cusub Stellar Hunter
3 Ingiriisiga, haa
A RPG mawduuc ku-meel-gaar ah oo leh walxo roguelike ah
Stellar Hunter lafteeda ayaa leh dhawr qodob oo soo jiita dareenka badan taasina waxay siisaa xoogaa xanaaq ah oo aan loogu turjumin Isbaanish. Marka hore, Waxaan raadin karnaa sahaminta khariidada inta la helayo si loo helo dhammaan noocyada tacaburrada. Taasi waa, waa khariidad sanduuqyo leh oo ay tahay inaan dhex marno.
Midda labaad, qeybta wadahadallada iyo go'aannada loo qaadayo sidii RPG wanaagsan oo taas ayaa noo geyn doonta hal koorso ama mid kale. Waxaan ku dhex muquurnaa tacabur leh asalkiisa. Waxaan ka helnay nafteena inaan si qasab ah ugu degno meeraha aan la aqoon si aan ugu baadhno dad kale oo badan oo ku jira hawo aad u wanaagsan.
Haa, oo ah dhinac saddexaad, xitaa waxaan leenahay dhinto aan rogrogmi karno si aan ugu dheganaano nuxurka saafiga ah ee cayaaraha doorka ee a sayidku nolosha dhabta ah wuu toosin jiray halka inta soo hartay ay dhiirranayeen. Halkan waxaad ku arki kartaa inay doonayeen inay la yimaadaan dhinacyo si ay u bixiyaan waayo-aragnimo aad u wanaagsan oo khubarada arrimahaas ku qancaan.
Ku cusbooneysii kooxdaada hubka iyo xubnaha cusub Stellar Hunter
Waxaan haynaa shan fasal, awooda lagu qoro xubno cusub iyo suurtagalnimada in la horumariyo hubkeena. Wax walba waxay noo horseedaan inaan ku darno khibrad RPG aad u wanaagsan maqnaanshaha luqaddaas oo dib u dhac badan gelin karta.
Sidoo kale waa inaan ku tashannaa booska istiraatiijiga ah ee kooxdeena si aan u hor dhigno kuwa heli kara waxyeelada ugu badan iyadoo ay ugu wacan tahay haanta noloshooda, halka kuwa fogna ay ku ciyaarayaan noocyada kale ee hubka. Si kale haddii loo dhigo, iyagu ma aysan ilaawin wax in ku dhammee ciyaarta ciyaarta dagaalkaas ku-saleysan taas oo aan ku shaqeyn karno otomaatiga si aan si fudud u noqonno daawadayaal.
Waxaan u tagi karnaa buug gacmeed, laakiin marka hore, inta aan tagno Stellar Hunter, waan jiidi karnaa doorashadan. Marka waan tagi doonaa daahfurka 8 galaxyo ee soo socda ciyaar mowduuc mowduuc leh oo si aad u wanaagsan ay u ciyaaraan ciyaaro kale oo badan; Waxay na xusuusinaysaa Xuduudaha Ganacsatada Xiddigaha xiisaha leh ee leh jawigaas gaarka ah ee aan ka neefsanno ilbidhiqsiyada ugu horreeya ee ciyaarta.
Waxay ku jirtaa beta sidaas waa macquul in mar uun ay horumariyayaashu cusbooneysiiyaan oo waxaan ku haynaa Isbaanish. Isbeddelkan wuxuu go'aansan lahaa in dad badan oo Isbaanish ah ay sii wadi doonaan inay ku raaxaystaan ​​ciyaar aan ku muujin karno dhinacyo badan oo sheegay.
Muuqaal ahaan waa kaamil ah mawduuca "neo punk" a la Borderlands, iyo goob laga abuuray dagaalka laftiisa, khariidadaas aan sahamineyno ama naqshada jilayaasha. Cadawgu aad ayuu u taxaddaraa faahfaahin yarna waan iska dhaafnaa si aan u helno horumar farsamo oo wanaagsan. Waxaan sidoo kale xoojineynaa xirfadaha.
Xiddiga Hunter ayaa lagu heli karaa bilaash ka socota Dukaanka Play ee gobolka beta. Adiga waxaan kugula talineynaa Adkaysiga weyn iyo RPG-ga Isbaanishka ah oo leh faallooyin iyo dhammaan waxqabadka xilligan.
Waxay leedahay waxyaabo badan si ay u noqdaan RPG aad ugu jeceshahay. Dabcan, waxay ku qoran tahay Ingiriisiga xilligan qaab beta ah.
Sida loo dejiyo iyo suurtagalnimada in la gaaro go'aanno lama filaan ah
Muuqaal ahaan waxay leedahay taabasho neo punk ah oo jecel
Dagaal xeeladeysan oo leex leex leex leex leexasho leh iyo karti aad saaxiibbo kula yeesho
Developer: LTGAMES CAALAMIGA
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Stellar Hunter waa RPG si fiican loo farsameeyay oo loo yaqaan 'RPG' oo leh dagaal ku saleysan leexasho
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee 'OnePlus Nord' cusub
Waxaan hadda sii deyn karnaa wicitaannada fiidiyowga ee Messenger si toos ah Facebook